Ezona zinkcenkceshelayo zamazinyo | Yeyiphi onokuyithenga? Izimvo, Amaxabiso kunye nothelekiso
Umlomo B Oxyjet
ngomlomo b ijethi yamanzi
Waterpik WP 300 Umhambi
Umlomo B PRO 2 2500
UPhilips Sonicare Usempilweni entle
Umlomo B PRO 750
Ngaba uyafuna ukufumana ezona ziphumo zibalaseleyo kucoceko lwamazinyo? Ulibale ngokuxukuxa okuqhelekileyo okanye ukuvungula kwaye uqale ukusebenzisa isiNcenkceshelo samazinyo. Ziyasebenza, zikhuselekile, kulula ukuzisebenzisa kwaye zinokugcina utyelelo oluninzi kugqirha wamazinyo.
Apha uya kufumana ulwazi olupheleleyo nolungenamkhethe malunga nezinkcenkceshelo zomlomo: Ukuthelekisa, uhlalutyo, izimvo kunye namaxabiso yeemodeli ezigqwesileyo kunye neempawu ukuze ukwazi ukukhetha eyona ifanele iimfuno zakho kunye nohlahlo lwabiwo-mali. Sukuphulukana neenkcukacha kwaye ufumane uncumo lwakho oluhle!
Uthelekiso lweZinkcenkceshelo zoMlomo ezigqwesileyo
Thelekisa ezona mpawu zibalulekileyo kwiidesktop ezingcono okanye izixhobo ezingenazintambo ngokukrwaqula ngezi tafile zimbini.
Uthelekiso lwezixhobo zokunkcenkceshela zeTebhulaphu
Uthelekiso lwezinkcenkceshelo ezingcono kakhulu zokuhamba
No. 1 kwintengiso
Uthelekiso lokunkcenkceshela kwamazinyo
Izinkcenkceshelo zoMlomo ezigqwesileyo
Yintoni iOral Irigator?
Yeyiphi iNcenkceshelo yamazinyo onokuthi uyithenge?
Sesiphi esona sinkcenkceshelo samazinyo silungileyo?
Okwangoku kukho amakhulu eemodeli kwimarike, kodwa ezi I-10 engcono kakhulu yokunkcenkceshela ngomlomo (idesktop kunye nelaptop) kunye nezinto ezithandwayo zabasebenzisi baseSpain:
I-Waterpik WP-100 - iMveliso ye ...
Amanqanaba oxinzelelo lwe-10 ukuya kuthi ga kwi-100 Psi
7 Iintloko eziqukiweyo
Izifakelo zoMlomo eziKhethekileyo, ii-Orthodontics, njl.
Ingcebiso ejikelezayo ye-360 degree
Nangona ingeyiyo imodeli ephezulu yenkampani, iWP-100 yi isinkcenkceshelo samazinyo esithengiswa kakhulu kwilizwe lethu iminyaka.
Le hydropulsor yeyophawu oluphambili kwihlabathi kucoceko lomlomo ngakumbi kucetyiswa ngoogqirha bamazinyo, inetywina le ADA (American Dental Association) kunye nokusebenza kwayo iye yaba ingqinwe ngokwenzululwazi.
Iinkcukacha zakho ziyadibana iimfuno zakhe nawuphi na umsebenzisi, ngakumbi kuba ibandakanya imilomo yazo zonke iimfuno.
Waterpik WP 100 Uhlalutyo
I-Waterpik Ultra Water Irigator ...
Ukucoca kunye nomsebenzi we-gum massage
El I-WP-660 sisindululo sethu kwabo bafuna umntu wokunkcenkceshela yomgangatho kwaye iphelele kakhulu ngexabiso elihlengahlengisiweyo. Ikuluhlu lwamaxabiso aphakathi, luvela kwi-brand ehamba phambili kunye neenkcukacha zayo kunye nezixhobo zibalaseleyo kuye nawuphi na umsebenzisi.
Le hydropulsor ine amanqanaba ahlukeneyo amandla, imilomo yazo zonke iintlobo zeemfuno kunye nobuchwepheshe obugqwesileyo benkampani enamalungelo awodwa abenzi kwimarike.
Waterpik WP 660 Uhlalutyo
I-Oral-B yeOxyjet yesiNcenkceshelo samazinyo...
Amanqanaba oxinzelelo lwe-5 ukuya kuthi ga kwi-51 Psi
4 Iintloko eziqukiweyo
Udonga okanye iNtaba yeTafile
Ityala leentsuku ezingama-30
UBraun uzakhele igama elihle kwihlabathi lokucoceka kwamazinyo kunye zokunkcenkceshela zabo kwakhona phakathi best kwimarike.
El Oxyjet ngu braun ngoyena mthengisi ubalaseleyo ukuba unenkqubo yokucoca leyo idibanisa ijethi yamanzi phantsi koxinzelelo kunye nomoya ococekileyo, eyenza iqela a ukhetho olugqwesileyo kubantu abaneentsini ezinobuthathaka.
Ngokubanzi, sisixhobo esipheleleyo kwaye abasebenzisi banelisekile ziziphumo ezinikezelayo. Kufanelekile ukukhankanya oko Uxinzelelo oluphezulu lungaphantsi kunezixhobo ezininzi zombane, kodwa ku-Oral B baye basazisa ukuba kucetyiswa ngokwezifundo zabo.
Oral B Oxyjet Uhlalutyo
I-Aquapik 100 - Isinkcenkceshelo samazinyo ...
Amanqanaba oxinzelelo lwe-10 ukuya kuthi ga kwi-130 Psi
Ukuba unohlahlo lwabiwo-mali oluluqilima, akunyanzelekanga ukuba uyeke isinkcenkceshelo somlomo esilungileyo kuba kukho iinketho ezininzi kwimarike amaxabiso afikelelekayo kulo lonke uhlahlo lwabiwo-mali. Sifuna ukuqaqambisa le modeli banayo iimbekiselo ezintle kakhulu zabasebenzisi ngubani okhe wayizama kwaye inika ntoni Iwaranti yeminyaka emi-5.
I-Aquapik evela kwi-brand ye-Oralteck Usa I-ADA iqinisekisiwe, ineenkcukacha ezibalaseleyo, ezona zixhobo zipheleleyo kunye a ixabiso elihlengahlengisiweyo ngokwenene malunga nokhuphiswano.
Aquapik 100 Uhlalutyo
Inkqubo yaManzi yePro-HC
Ukunkcenkceshela ngomlomo okanye kwamazinyo ...
Amanqanaba oxinzelelo lwe-5 ukuya kuthi ga kwi-75 Psi
11 Iintloko eziqukiweyo
Enye i-hydropropeller yezoqoqosho evelele ngaphezu kwayo yonke enye sisixhobo sophawu Pro-HCNgokukodwa INKQUBO YAMANZI I-PREMIUM, ukuba siye sahlalutya nakwiwebhusayithi yethu.
Yimveliso leyo Ivelele ngaphezu kwayo yonke into kwinani leentloko ezibandakanyiweyo kunye nakwisiseko sayo esisisiseko kodwa esisebenzayo nesilula. Ukongeza ekuphuculeni ukucoceka komlomo, ineentloko ezimbini ze ukunkcenkceshela ngeempumlo.
Uhlalutyo lweNtlawulo yaManzi lweNkqubo yaManzi
I-Waterpik 450- Isinkcenkceshelo soMlomo ...
Amanqanaba oxinzelelo lwe-2 ukuya kuthi ga kwi-75 Psi
Ngaphandle kwexabiso elingaphezulu komndilili, iWp-450 Yenye yezona hydropulsors zithengiswa kakhulu kwilizwe lethu. Iinkcukacha zayo ezipheleleyo kunye namava e-brand yenza kube ukubheja okukhuselekileyo.
Imi ngaphandle komndilili kwi umgangatho ongcono wezinto, umthamo omkhulu wetanki, ukuzimela ngakumbi kwebhetri kwaye ibandakanya imilomo ekhethekileyo ukufakelwa kunye ne-orthodontics.
Uhlalutyo lwe-Waterpik 450
I-Panasonic EW1211W845 Isinkcenkceshelo ...
Uxinzelelo ukuya kwi-85 Psi kunye ne-1400 pulses ngomzuzu
Iimowudi ezi-3 (UMOYA NGOKUQHELEKILEYO, UMOYA EMFUBENI, JET)
2 Iintloko eziqukiweyo
Eyona nto ibhetele Izinkcenkceshelo zePanasonic Ziyimodeli yebhetri kwaye le irrigator yomlomo engenazintambo esinye sezixhobo ezinexabiso eliphezulu elisemgangathweni kwimarike. Oku kuyibeke njenge omnye wabathengisi ababalaseleyo kwilizwe lethu, ngaphezulu even waterpik.
Sisixhobo esine amandla alungileyo kunye neendlela ezintathu zokusebenza kwiziphumo ezilungileyo kakhulu kucoceko lomlomo. Ukungalungi kuphela xa kuthelekiswa nezinye iimodeli ngumthamo ophantsi wetanki, efuna ukuba ifakwe kwakhona amaxesha amaninzi.
Bona ngakumbi iPanasonic yokunkcenkceshela kwamazinyo
Waterpik WP-300 Umhambi
AMANZI KHETHA-AMANZI KHETHA WP300 ...
Amanqanaba oxinzelelo lwe-3 ukuya kuthi ga kwi-80 Psi
450 ml ichibi imizuzwana engama-60
Njengoko igama layo libonisa, iWP 300 ngumzekelo we desktop ngoyilo kunye neempawu ezenza kube lula ukuyithatha naphi na apho sihamba khona.
Ngenxa yoko banayo yanciphisa ubukhulu bayo kwaye bayilwe ngendlela yokuba inokugcinwa kwibhegi encinci yokuhamba ifakiwe.
Ikwanayo ukuhambelana negridi yamandla yamazwe ahlukeneyo, iyenza ibe yimodeli ephathekayo ephathwayo kwiimodeli zebhetri.
Uhlalutyo lwe-Waterpik Traveler
Oral-B 2 ku-1
I-Oral-B PRO 3000-Isikhululo ...
Ewe I-2-in-1 yokunkcenkceshela ngomlomo nge-irrigator kunye ne-brush amazinyo inkokeli engathandabuzekiyo le brand hydropulsor Umlomo-B. Kwakwikhithi enye sine a ibhrashi yamazinyo ekhokelayo yombane kunye ne-hydropulsor yokwenza ukunkcenkceshela ngomlomo emva kokuxubha.
Kananjalo asifuni ukulibala enye imodeli ye-2-in-1 esiyihlalutyileyo, i Waterpik WP900. Nangona ingathandwa kangako ngabasebenzisi, yenziwa yinkampani enezona zinkcenkceshelo zamazinyo zibalaseleyo kwimarike.
Ukuba awukabinayo ibhrashi yamazinyo yombane, lolona khetho lufanelekileyo fumana ucoceko olupheleleyo lwamazinyo ekhaya.
I-Sowash: iFaucet Irigator ngaphandle kweMotor
I-SOWASH yokunkcenkceshela kwamazinyo...
Ngaba uyafuna i-booster engeyomoto engenzi ngxolo kwaye engasebenzisi mandla ombane? I-Sowash inezimvo eziphantse zibe yi-100 kunye nenqaku eliphakathi 4.2 ngaphandle kwe-5 ngabasebenzisi abayithengileyo.
Ixabiso layo liphantsi kunezinye iimodeli ezidityaniswe kwimpompo kwaye ngaphezu kwayo kwabathengisi abagqwesileyo kwaye baxatyiswe kakhulu.
Okwangoku kukho amakhulu eemodeli zeempawu ezahlukeneyo neenkcukacha ezahlukeneyo, uyilo kunye namaxabiso. Oku kwenza kube nzima ukukhetha isinkcenkceshelo somlomo esilungileyo kumntu ngamnye.
Eyona nto ibalulekileyo kwi-hydropulsor kukuba iyasebenza ekupheliseni ibhaktheriya kunye nenkunkuma yokutya enokuthi ihlale emlonyeni womlomo emva kokuxubha.
Ukuqala kwesi siseko, kukho iinkcukacha ezithile ezibaluleke ngakumbi, njengoseto loxinzelelo okanye umthamo wetanki, kunye nezinye ezingabalulekanga kangako njengoyilo okanye inqanaba lesandi.
Isikhokelo sokuKhetha esona sinkcenkceshelisi somlomo silungileyo
Zezi iimpawu eziphambili ekufuneka ziqwalaselwe Ukukukhethela esona sinkcenkceshelo singcono:
Ekuqaleni, eyona ixhaphakileyo kukukhetha imodeli yedesktop ngempompo yombane, kodwa kukho abantu abakhetha a Isinkcenkceshelo samazinyo esiphathwayo ukuyithatha kuhambo lwakho okanye enye ngaphandle kwenjini.
Iindlela zoxinzelelo kunye neshawari yamazinyo
Enye yeempawu eziphambili ezibonelela ngokucocwa okuchanekileyo yi amandla kunye nomgangatho wejethi yamanzi. Isindululo sethu kukukhetha iimodeli ezinamandla aphakamileyo kodwa zihlala zihlengahlengiswa, ukuze sikwazi ukuyilungisa ngokweemfuno zethu. Amandla aphezulu kodwa angalawulwayo anokubacaphukisa abanye abantu.
Ngaphandle kwamandla ahlukeneyo, kwakhona kukho iijethi zamanzi ezahlukeneyo kunye nezixhobo zombane kunokwenzeka ukukhetha iindlela ezahlukeneyo zokusebenzisa. Kukho iijethi ezine iibhithi ezininzi ngomzuzu, iijethi ezihambayo ixutywe namaqamza omoya kwaye nkqu squirt indlela yokuphulula.
Kwezinye iimodeli ubukhulu betanki Akwanelanga ukucocwa okupheleleyo, ngoko ke kuya kufuneka ukuba uyigcwalise kwakhona ngexesha layo. Oku ekuqaleni kubonakala kungabalulekanga kodwa ekuhambeni kwexesha inokucaphukisa, ngakumbi ukuba incinci kakhulu kwaye kufuneka ugcwalise amaxesha amaninzi ngokusetyenziswa.
Ukongeza kwimilomo eqhelekileyo yamazinyo emboleko asempilweni, kukho imilomo elungiselelwe abasebenzisi abasebenzisa i-orthodontics okanye abo bafakelwa amazinyo. Ukuba sifuna ukufumana iziphumo ezilungileyo, siyakucebisa ukuba ukuthathele ingqalelo oku xa ukhetha esona sinkcenkceshelo singcono kuwe.
Kukwafanelekile ukukhankanya ukuba kukho iimodeli ezinemibhobho esisigxina kunye ne Imilomo ejikelezayo kwaye ivumela ukufikelela lula kuzo zonke iindawo zomlomo.
Ubukho bezahlulo ezisecaleni kunye / okanye izincedisi
Ngaphambi kokuba ukhethe i-hydropulsor kufuneka uqiniseke ukuba ubuncinane imilomo yokutshintsha iyafumaneka ukuba uya kufuna. Le mibhobho inobomi obuluncedo beenyanga ezimbalwa kwaye Kuyimfuneko ukubuyisela, njengebrashi yamazinyo.
Ukuthenga imodeli kwiimpawu ezaziwayo kuqinisekisa ukuba iindawo ezisecaleni ziya kuba ekhoyo ixesha elide.
Inqanaba lengxolo kunye noYilo
Nangona ziimpawu ezo musa ukuphembelela ngokuthe ngqo ukusebenza Kwindawo yokunkcenkceshela ngomlomo, kukho abantu ababaluleke kakhulu kwiinkalo zombini. Ingxolo ayinakuthintelwa kwizinkcenkceshelo ezinamandla, kodwa yinyani leyo ezinye izixhobo zisuka entliziyweni kunezinye. Ukuba ufuna ntoni Ukuthula ngokupheleleyo ngexesha lokunkcenkceshela ngomlomo kuya kufuneka ukhethe enye yeemodeli ngaphandle kwemoto ezifakwe kwitephu.
Iindidi zoyilo zinkulu, zikwazi ukukhetha imibala eyahlukeneyo kunye nobukhulu obahlukeneyo. Kukho nezinye i-benchtop thrusters edibeneyo eyenzelwe ukuhamba, njenge waterpik wp-300 umhambi. Ezinye izixhobo zombane zinokuxhonywa eludongeni, into enokuthakazelelwa kwiindawo ezincinci.
Ixabiso lokunkcenkceshela kwamazinyo kunye neWaranti
Ukusebenza kokunkcenkceshela kunye nokwaneliseka ngokubanzi kwabasebenzisi kuye kwathetha ukuba kwiminyaka yamuva imfuno yonyukile. Njengoko imfuno isanda, inyambalala yabavelisi abatsha baye babonakala beqalise ukuthengisa iikopi kwezona mpawu zibalaseleyo. Olu hlobo abanamava okanye iziqinisekiso ukusebenza kakuhle okufana ne-Waterpik, evunywe yi-ADA kwaye ibivelisa izinto ezintsha kunye ne-patent yayo itekhnoloji ngaphezulu kweminyaka engama-30.
Kucacile ukuba ayinguye wonke umntu onokufikelela kwiimodeli ezilungileyo kakhulu kwimarike, kodwa uhlaza Izinkcenkceshelo zamazinyo ezitshiphu enika iziphumo ezintle kakhulu. Kwiwebhusayithi yethu unokufumana ngaphezulu kweyodwa enomgangatho olungileyo kunye nezimvo ezilungileyo kakhulu zabasebenzisi.
Uluvo lwabanye abasebenzisi abaye bazama i-irrigator yomlomo ireferensi efanelekileyo yokwazi ukuba zeziphi iziphumo ezinikezelayo. Wonke umntu wahlukile, kodwa i-hydropulsor enamanqaku amaninzi kwaye ifumana amanqaku aphezulu aphakathi ayinakwenzeka ukuba isidanise.
Bona ezona zinkcenkceshelo zomlomo zibalaseleyo
Iintlobo eziphambili zeeNcenkcesho zoMlomo
Inyathelo elinye ngaphezu kwayo yonke into yi-Waterpik, inkokeli yehlabathi kwiinkcenkceshelo zamazinyo nge uninzi lwamalungelo awodwa omenzi wechiza kunye nezifundo zenzululwazi ezixhasa iimveliso zabo. Nangona ingomnye wabathengisi ababalaseleyo, ayisiyiyo yodwa ene-boosters elungileyo.
Cofa kubo ukuze ufikelele kulo lonke ulwazi malunga neempawu ezibalaseleyo kunye neemodeli zazo ezilungileyo:
[su_row] [su_column size = »1/2 ″ iziko =» hayi »iklasi =»»]
[/ ikholamu esezantsi] [/ su_row]
Yintoni isiNcenkcesho samazinyo?
Ukunkcenkceshela ngomlomo okanye ishawa yamazinyo sisixhobo nje esisebenzisa a ijethi yokuphefumla yamanzi acinezelekileyo ukususa inkunkuma yokutya kunye icwecwe lebhakteria que baxhathisa ukuxutywa kwemihla ngemihla.
Le ndlela yaziwa njenge ukunkcenkceshela ngomlomo kwaye ufumane ukufikelela kwiindawo ezinzima yomlomo womlomo, njengendawo ephakathi kwamazinyo, umgca wentsini okanye ipokotho yeperiodontal.
Usisebenzisa njani isiNcenkceshelo samazinyo
Bonke abankcenkceshela banenkqubo efanayo kakhulu kwaye ngokwesiseko baqulunqwe a itanki yamanzi, impompo kunye nomlomo indawo yokufaka ijethi yoxinzelelo.
Ezinye iimodeli zibandakanya ukuphuculwa okunje imilomo eyahlukeneyo, amanqanaba oxinzelelo ahlengahlengisiweyo ahlukeneyo, kunye ne-massage okanye ukhetho lokwenziwa mhlophe kwamazinyo. Phakathi kwemilomo eyahlukeneyo sinokufumana ezikhethekileyo i-orthodontics, ngenxa Ukufakelwa kwaye ulwimi.
Imibuzo Ebuzwa Rhoqo malunga neNcenkceshelo yoMlomo
Iintandabuzo eziqhelekileyo malunga nee-hydropulsors
Xa kuyimfuneko ukusebenzisa i-hydropulsor?
Zifanele nabani na abafuna ukufumana ucoceko olungcono lwamazinyo kumakhaya abo, ngaloo ndlela benceda ukuthintela izifo zomlomo. Akukho mfuneko yokuba ube neengxaki zokuzisebenzisa, kwaye kukho iimodeli zabantwana, kodwa kufuneka isoloko isetyenziswa kwezi meko:
Izigulane ezinezihlangu ezenza kube nzima ukucoca
Izigulana zokufakelwa kwamazinyo
Izigulane ezine-gingivitis okanye i-periodontitis
Kukangaphi ngemini kusetyenziswe isinkcenkceshelo somlomo?
Ingasetyenziswa emva kokuxutywa kwamazinyo, ukuba nje ingaphantsi kwemizuzu emi-5 rhoqo kwiiyure ezimbini
Ngaba Amanzi etephu ayasebenza?
Izinkcenkceshelo sebenza ngamanzi ompompo aqhelekileyo, akuyimfuneko ukusebenzisa amanzi amaminerali okanye ukusebenzisa naziphi na izongezo.
Ngaba abantu abaninzi banokuyisebenzisa?
Las Imilomo iyatshintshatshintsha kwaye iza ngemibala eyahlukeneyo ngokubanzi, ngoko ke i-hydropulsor enye ingasetyenziswa ngamalungu osapho ahlukeneyo.
Ngaba ingasetyenziswa kunye nokuhlamba uMlomo?
Nangona kungeyomfuneko, i-mouthwash inokongezwa kumlinganiselo ophezulu we-1: 1. Akukhuthazwa ukusebenzisa ezinye izongezo ezifana ne-bicarbonate okanye i-chlorine.
Iindidi zokunkcenkceshela ngomlomo
Singathenga ngoku iintlobo ezintathu yezixhobo zokunkcenkceshela ngomlomo:
Ukunkcenkceshela kwetafile: Kufuneka uzifake kwinethiwekhi yombane kwaye zezona zixhaphakileyo. Njengomgaqo jikelele, ngabo banikezelayo ukusebenza ngcono, iindlela ezininzi zokusetyenziswa kunye nenani lemibhobho. Basenokuba yimizekelo ukunkcenkceshela okulula okanye ezimbini-kwinye, ekwabandakanya i ibrashi yamazinyo yombane.
Izinkcenkceshelo eziphathwayo: Ziimodeli ezingenazingcingo ukuba bandakanya ibhetri egcwalisekayo. Ezi zixhobo zezona ndlela ilungileyo ukuba ufuna ukuyisusa ekhaya okanye unesithuba esincinci kwigumbi lakho lokuhlambela.
Faucet isinkcenkceshelo samazinyo ngaphandle kwemoto: Olu hlobo lwezixhobo zezona zithengiswa kancinci, kodwa zineengenelo ezithile. Kwanele nge zidibanise ngqo kwimpompo kwaye ekubeni ingenayo injini, ayifuni amandla kunye abenzi ngxolo.
Apho uThenga i-Oral Irigator?
Nokuba ukhetha le modeli okanye nayiphi na enye Isindululo sethu kukuthenga kwi-intanethi kwi-Amazon. Ngaba Iimpawu ezininzi, awona maxabiso angcono kwi-intanethi, ukuhanjiswa ngenqanawa ngexabiso eliphantsi kwaye ngokukhawuleza kwaye ungabuyisela izinto ozithengileyo ngaphandle kweengxaki. Sineminyaka sisebenza nabo kwaye asikhange sibe nangxaki.
Izinkcenkceshelo zoMlomo ezithengiswa kakhulu
Sikuxelele ukuba zeziphi ezona modeli zibalaseleyo kwimarike, kodwa ezi mveliso azihlali zidibana nabona bathengisa kakhulu. Ngezantsi ungabona a uluhlu oluhlaziywa ngokuzenzekelayo ngezona zinkcenkceshelo zamazinyo ezithengiswa kakhulu okwangoku:
Isinkcenkceshelo soMlomo esiphathwayo ... Bona amanqaku Izimvo eziyi-11.106 Jonga isivumelwano
I-Oral-B yeOxyjet yesiNcenkceshelo samazinyo... Bona amanqaku Izimvo eziyi-20.761 Jonga isivumelwano
I-Apiker yokunkcenkceshela kwamazinyo ... Bona amanqaku Izimvo eziyi-10.840 Jonga isivumelwano
Isinkcenkceshelo soMlomo esiphathwayo ... Bona amanqaku Izimvo eziyi-5.344 Jonga isivumelwano
Izinkcenkceshelo zoMlomo-TUREWELL... Bona amanqaku Izimvo eziyi-8.364 Jonga isivumelwano
Ingcali yokunkcenkceshela kwamazinyo ... Bona amanqaku Izimvo eziyi-3.930 Jonga isivumelwano
Okona kulungileyo	Isinkcenkceshelo soMlomo esiphathwayo ...
Umgangatho wexabiso	I-Oral-B yeOxyjet yesiNcenkceshelo samazinyo...
Oyintandokazi yethu	I-Apiker yokunkcenkceshela kwamazinyo ...
Isinkcenkceshelo soMlomo esiphathwayo ...
Ingcali yokunkcenkceshela kwamazinyo ...
Izimvo ezi-4 kwi«»
Ndingayithenga phi iplagi yamagnetic yesinkcenkceshelo sam se-waterpik ????
Molo Maria. Awuyikhankanyi imodeli onayo ukuze ikuncede. Kwimeko nayiphi na into, kwiwebhu unokufikelela kwidatha yenkonzo yezobuchwepheshe ye-brand yaseSpain.
Inqaku elipheleleyo !! Bade bakhankanye ukunkcenkceshela kwamazinyo abo badibanisa kwimpompo 🙂 (Ndiyabathanda). Ndiye ndasebenzisa ukuhlamba ngoko kwaye inyaniso ngumgangatho ... rhoqo ukususela amanzi aphuma ngokuqhagamshelwa kwimpompo phakathi kwezinye izinto. Kwabo benu abathanda ukunkcenkceshela kwamazinyo ngakumbi, kukho ezinye iibrendi ezingcono kune-So Wash, ezinje ngo-Kler ..., Ban ...
Ukunandipha ukunkcenkceshela kwaye ungalibali ukuya kugqirha wamazinyo ngamaxesha ukuba into enye ayisusi enye 🙂
Enkosi kakhulu uAna, sizama ukudala umxholo kunye nomgangatho. Ndiyabulisa
Inoxanduva lwedatha: AB Internet
Ukunkcenkceshela kwamazinyo 2022 - Umgaqo-nkqubo wobumfihlo - Ulwazi malunga neicookies